Ntuliaka 2019: Otu Obasanjo CNM akwadola pati ADC - BBC News Ìgbò
Nkenke aha onyonyo Obasanjo bidoro otu ya iji kpota Naíịjirịa
Otu onye bụbu onyeisiala Naịjirịa bụ Olusegun Obasanjo kpokobara nke o kwuru na ọ bụ maka ijikọ Naịjirịa na-abụghị maka ndọrọndọrọ ọchịchị abanyela ya bụ ndọrọndọrọ n'ezie.
Ọ dịka ntuliaka 2019 na ọchịchị Naịjirịa dị Obasanjo n'uche kamgbe dịka otu ya malitere ikwado otu pati African Democratic Congress ADC n'aha ịchafụ.
Obasanjo gosipụara nke a ụnyaahụ n'ọbaakwụkwọ ya dị n'obodo ya bụ Abeokuta dị n'Ogun steet.
Ọ gwara ndị ntaakụkọ na ihe o jiri mee nke a bụ ka otu ahụ nwee ike inweta ebumnobi ya nke bụ Naịjirịa ọhụrụ.
N'akwụkwọ o dere o jiri kwuo okwu nke ọ kpọrọ isiokwu ya "Ọrụ m banyere ọdịnaihu ọchịchị onye kwuo uche ya na nkwalite na Naịjirịa" ọ gwara ndị ntaakụkọ na mkpebi ya bụ iji mee ka otu ahụ nweta ebumnobi ha.
A malitela otu njikọ nke Obasanjo
'Ntuliaka 2019 ga-adịkwa kpọkpọnki'
Naanị onuku ga-ekweta na Buhari emela ọfụma
N'okwu ya, "Kamgbe e bidoro ya bụụ otu Coalition for Nigeia Movement CNM n'aha ịchafụ, ọtụtụ n'ime otu pati ruru 68 abịala jụọ otu ahụ maka ịbịakọta ọnụ.
"Ndị ndu ya bụ otu mere nyocha pụrụiche ma jụọ ase dịka ka ha bukwa n'uche ebumnobi nakwa ebe ya bụ otu chere ihu, ha kwekọrịtara ikwado otu pati ADC ịbụ otu ha ga-eso iji weta mgbanwe n'ọchịchị Naịjirịa."
Obasanjo kwuru na ADC dị nkwadebe ma dị uchu iweta ụdị mgbanwe ga-ebuli Naịjirịa elu n'akụkụ niile.
Ọ nwalekara ụmụ Naịjirịa ka ha bilie mee ka Naịjirịa dị ike ọzọ.
Obasanjo gwakwara ndị omeiwu ka ha sachapụ mpụ na mmerụaka n'ime onwe ha site n'ime iwu ga-emezi Naịjirịa.
Ọ chọkwara ka a mezie iwu Naịjirịa ka o nye ndị Inec ikike ihazi ego ndị pati ji achụ nta vootu ebe o kwuru na ya chọrọ ka Inec mee ntuliaka niile na Naịjirịa bido na nke onyeisiala rue na nke ndị okpuru ọchịchị.
Ha kwuru na ya bụ otu pati ADC bụ ijikọ aka hụ na ha nyere otu pati nọ n'ọchịchị ugbua bụ APC ọsọ n'afọ 2019.
Ihe na-akpa m bụ nchekwa na akụnaụba obodo
Ndị mahadum IMT majara onye ntaakụkọ BBC
Naanị onuku ga-ekweta na Buhari emela ọfụma - Obasanjo
3 Mee 2018
Ntuliaka 2019: Atiku Abubakar chọrọ ịzọ ọkwa onyeisiala
28 Maachị 2018
A malitela otu njikọ nke Obasanjo dere maka ya
31 Jenụwarị 2018